Global Voices teny Malagasy » Libanona: Ny Fizahan-Tany No Mandoa Be · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Septambra 2012 1:06 GMT 1	 · Mpanoratra Thalia Rahme Nandika Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Arabia Saodita, Bahrain, Emirà Arabo Mitambatra, Katara, Koety, Libanona, Ady & Fifandirana, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna, Tsidika
Tsy manana loharanon-tsolika sy fitrandrahana ambanin'ny tany Libanona. Eo amin'ny lafiny ara-jeôgrafia dia tena kely tsy mahavita tena ara-pambolena izy. Ary ny làlan-tokana hiveloman'ny firenena dia ny sehatry ny fonolorana tolotra, indrindra fa ny fizahan-tany, raha sy rehefa avelan'ny politika.
Nefa tsy nanam-bintana Libanona tamin'io sehatra iray io. Nopotehan'ny ady an-trano nandritra ny 30 taona izy, izay nampandositra ireo mpizaha tany. Taorian'izay rehefa nanandrana nisintona mpitsidika ho any amin'ny tanin’ i Cedars, na ny Tandrefana na ny Arabo, ry zareo Libane, dia loza ho azy ireo fa tonga zava-poana daholo ny ezaka rehetra natao hampandrosoana ny sehatry ny fizahan-tany.
Ireo fiantraikany amin'ny fizahan-tany
Hazo Cedar anaty fanala , Bcharre, Libanona. Sary avy amin'i Leandroid mpampiasa Flickr (CC BY-NC 2.0).
Ireto ny zava-niseho vao haingana izay nisy fiantraikany tamin'ny sehatry ny fizahan-tany Libane : ny famonoana ny Praiminisitra Libane teo aloha Rafic Hariri tamin'ny 2005  sy ny famonoana mpanao politika maro be nifanesy, ny Jolay 2006 ady tamin'i Israely, ny May 2008 fifandrafesana anatiny  teo amin'ireo mpanao politika mpanakorontana, ary ny trangan-javatra vaovao amin'ny fizarazarana amin'ny krizy syriana sy ny fiverenan'ny fakàna olona an-keriny  ao an-toerana.
Noho ny fampitandremana ataon'ny masoivoho amin'ireo terataniny handao an'i Libanona, nidina 60 isan-jato  ny famandrihan-toerana any amin'ny trano fandraisam-bahiny hatramin'ny faha-14 n'ny volana Aogositra. Tsikaritra ihany koa ny fanafoanana famandrihan-toerana amin'ny fiaramanidina.
Tamin'ny Twitter, nibitsika tamin'ny laharan'ny Masoivoho any Beirut ny Minisitry ny Raharaham-bahinin'ny Emirà Arabo Mitambatra, mamporisika ny terataniny any Libanona hanatona ny Masoivohony mba hiarovana ny fampodiana azy ireo haingana an-taniondrazana : [ar]:
@MOFAUAE Ho an'ny teratany avy any Emirà Arabo Mitambatra any Libanona ankehitriny, antsoy amin'ity laharana ity () ny Masoivoho any Beirut azafady na amin'ny …
Misaona ny fotoanan'ny fizahan-tany ireo Libane mpiserasera amin'ny aterineto. Malahelo i Najib avy amin'ny Bilaogy Baladi  :
Raha atambatra, heveriko fa ity no lohataona ratsy indrindra nolalovanay teto Libanona nandritry ny 10 taona, ary mbola ratsy noho ny tamin'ny 2006. Tena mampalahelo mihitsy indrindra fa ampian'ireo zava-misy eto amin'ny firenena.
Fintinin'i Rawad Khoueiry ao amin'ny Twitter ny toe-draharaha :
@rawadkhoueiry : Fizahan-tany amin'ny lohataona any Libanona : Jiro tapaka, ny Elatra Miaramilan'i Mokdad, Làlana mankany amin'ny seranam-piaramanidina Tapaka, Poa-basy any amin'ny Sisintany Avaratra
Wael Abou Diab dia manazava ny antony [ar]:
@Waelad : Mijaly i Beirut. Trano fandraisam-bahiny foana, toy ny tsy misy ny fizahantany. Ny antony dia mifandray amin'ny ara-pivavahana, ara-paritra ary ny fitsitokotokoana.
Nefa toy ny mahazatra dia eo foana sy nahatohitra ny olana rehetra ny fahaizan'ny Libane mandray am-pitsikiana ny zava-miseho. Mino i Ralph Nader fa ny habetsahana izay tsy izin'ireo Syriana mpialokaloka any Libanona no fanafan'ny fatiantoka ho an'ireo teratanin'ny Golfa.
@Aamchit : Miha-mandroso ny fizahantany any Libanona. Avy any Damaskosy,Tartous, Homs, Aleppo, Deir El Zor ary tanàna maro hafa ireo olona tonga. #irony (eso)
Nanjary toy ny karazana tsy fahita firy ny mpizaha tany any Libanona ka nahagaga an'i Bechara.
@BouCha2ra : Vinavinao inona ?! Nahita mpizaha tany aho omaly! \_m/ O.o #Lebanon
Mbola maneso ihany koa i Zeina Mhanna :
@MissZenaH : Nitondra mpizaha tany Turc aho androany… natoroko làlana izy mba hiarovany ny tenany amin'ny fangalàna vahiny an-keriny aty #Libanona
Nitsidika an'i Istambul i Wajih ary izao no hanetsiketsehany ny sehatry ny fizahan-tany amin'ny fireneny :
@neruda906 : Nisy niteny tany amin'ny Ministry ny fizahan-tany fa manao asa goavana aho aty, mandresy lahatra ny olona rehetra mifanena amiko aho mba tsy hitsidika an'i Beirut 🙂 #Lebanon
Ny Hevitry ny Mpiserasera amin'ny Aterineto avy any Golfa
Tora-pasik'i Voile Bleue any Jbeil, Libanona. Sary avy amin'i Haole Punk mpampiasa Flickr (CC BY-NC-SA 2.0).
Noho fampihorohoroan'ny antokon'ny Al Mekdad haka azy ireo an-keriny, dia diso fanantenana ireo teratany avy any Golfa. Maktoum Bin Butti, avy any Emirà arabo Mitambatra dia manamarika :
@Makoumbinbutti : Ny firenena mpikambana ao amin'ny GCC dia manohana ara-bola an'i Libanona ary manetsiketsika ny fizahantanin-dry zareo & setrin'izany alaina an-keriny ry zareo #awkward#GCC
AbdulRahman Al Haji dia miantso ireo mpiray tanindrazana aminy hanao ankivy an'i Libanona [Ar] :
@alhajji1963 : Manomboka izao, ry mpizaha tany avy any Golf, ataovy ankivy i Libanona, fanjakana tsy milamina. Ataovy ankivy izy ireo . Ataovy ankivy izy ireo.
Borzou Daraghi, iraky ny Financial Times any MENA, dia mihevitra fa Jordania sy Tiorkia no hahazo tombony bebe kokoa vokatry amin'ny zava-mitranga any Libanona
@Borzou : miaraka amin'i #Syria, #Egypta ary ankehitriny #Libanona ilaozan'ny mpizaha tany Arabo mpanankarena avy any Golfa dia sahiko ny miloka fa #Turkey & #Jordan no handroaka ny vola be
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/09/08/37811/
 famonoana ny Praiminisitra Libane teo aloha Rafic Hariri tamin'ny 2005: http://en.wikipedia.org/wiki/Assassination_of_Rafic_Hariri
 famonoana mpanao politika : http://en.wikipedia.org/wiki/2005_Lebanon_bombings
 Jolay 2006 : http://en.wikipedia.org/wiki/July_war
 May 2008 fifandrafesana anatiny: http://en.wikipedia.org/wiki/2008_conflict_in_Lebanon
 fakàna olona an-keriny: https://globalvoicesonline.org/2012/08/23/lebanon-its-back-to-kidnapping-time/
 60 isan-jato: http://english.al-akhbar.com/node/11352
 @MOFAUAE : https://twitter.com/MOFAUAE/status/236224828162580482
 Bilaogy Baladi: http://blogbaladi.com/arab-tourists-fleeing-lebanon-during-eid-al-fitr/